Kuhle Isithangami sesoftware kusukela ngonyaka we-2004
ngaphezulu ...Isikhathi sokushaja esivamile
Bhalisa inkundla yamahhala
Khetha igama le-akhawunti (isizinda sakho) bese unikezela ngekheli lakho le-imeyili. Sicela wazi ukuthi iphasiwedi yakho eyinhloko yomqondisi izodluliselwa kwikheli lakho le-imeyili. Ngeke size sikuthumele ogaxekile noma ukukhangisa. Noma kunjalo, i-imeyili enephasiwedi yakho eyinhloko yomqondisi ingaba kwifolda yakho yogaxekile.
Lapha ungakha kalula inkundla yamahhala nenamandla! Dala futhi udizayele inkundla yakho yomphakathi ngokuchofoza okumbalwa. Thola ukuphathwa kalula nezici zenkundla yakho yamahhala. Isoftware yethu yesithangami njalo ithuthukiswa, ukugcinwa nokuvuselelwa kokuphepha kwenziwa njalo. Ngemisebenzi emisha nokushintshwa sinendlebe evulekile yezifiso. Zuza eminyakeni yethu eminingi yesipiliyoni ekusingatheni izinkundla ze-inthanethi. Sinakekela ukuphepha nokutholakala kwamaseva. Ukubuyekezwa njalo kwesoftware kuqinisekisa ukuthi izindaba zokuphepha zixazululwa ngokushesha.
Igama le-akhawunti [A-z no-0-9]: .fboard.de
Lapha ungakha kalula inkundla yamahhala nenamandla! Dala futhi udizayele inkundla yakho yomphakathi ngokuchofoza okumbalwa. Thola ukuphathwa kalula nezici zenkundla yakho yamahhala. Isoftware yethu yesithangami njalo ithuthukiswa, ukugcinwa nokuvuselelwa kokuphepha kwenziwa njalo. Ngemisebenzi emisha nokushintshwa sinendlebe evulekile yezifiso. Zuza eminyakeni yethu eminingi yesipiliyoni ekusingatheni izinkundla ze-inthanethi. Sinakekela ukuphepha nokutholakala kwamaseva. Ukubuyekezwa njalo kwesoftware kuqinisekisa ukuthi izindaba zokuphepha zixazululwa ngokushesha. Imibandela yokusebenzisa kusukela ekusetjenzisweni iyasebenza.